दोश्रो नारायण गोपालको रुपमा ४० कटेसी पूर्वबाट भाईरल अमित राई रुँदै मिडियामा (भिडियो सहित)
Homeसमाचारदोश्रो नारायण गोपालको रुपमा ४० कटेसी पूर्वबाट भाईरल अमित राई रुँदै मिडियामा (भिडियो सहित)
August 30, 2020 admin समाचार 16898
उमेरले डाडो काटिसके’को छ । तर, मनको उत्साह अझै कम भएको छैन । बालापनदेखिको गायन कला यतिबेला आएर प्रबि’धिको बिकासले सबैमाझ चिनिन पाउँदा उनी दङ्ग छन् । हो, उनी हुन ४८ वर्षिय अमित कुमार राई ।
पछिल्लो समय सामा’जिक संजाल फेसबुक, टिकटक तथा युट्युबले धेरै प्रतिभालाई चिना’एको मात्रै छैन ब्यवसायिक कला’कार समेत भैसकेको उदाहरण नेपालमा प्र’सस्तै छन् । यस्तै चिनिएको नाममै पर्छ अमित ।
सामाजिक संजाल टिक’टकमा उ’नले गीत गाउदै गरेको एक गीत भाईरल भयो । त्यो गीत थियो स्वर सम्रा’ट नारायण गोपा’लको । अमितको उक्त गायन कला सुनेपछी टिक’टक प्रयोगक’र्ताहरुले उनको प्रसंशा मात्रै गरेनन् दो’श्रो नारायण गोपालको ट्याग समेत भिराए ।
अमित मा’त्रै हैन उनका अन्य दाजु’भाइ पनि यस्तै संगी’तका पारखी हुन् । हेर्नुस् उनी संग लिइए’को रमाईलो अन्तरबार्ता । भिडियो हेर्नुहोस्…
यी हुन्: ५ सय भन्दा बढी कोरोना संक्र’मित रहेका नेपालका ११ जिल्लाहरु…
आज सोमबार भगवान शिवको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस्
निशा घिमिरेको अभिनय रहेको “ट्याक्सी मोटर कार” गीतको भिडियो सार्वजनिक – हे’र्नुहोस्
June 19, 2021 admin समाचार 4743
दुई वर्ष अघि कलाकारिता अध्ययन गर्न भारतको देह’रादून गएकी उनी स’डक दु’र्घ’टनामा परी ग’म्भी’र घा’इ’ते भएकी थिइन् । परिवारको आर्थिक अवस्था क’मजोर हुँदा उप’चार सम्भव नभएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै ना’जुक बन्दै गइरहेको जनाइएको छ
श्रीमती सँग सुतेका श्रीमानले रातीको साढे २ बजे पलङ मुनि हेर्दा….
April 22, 2022 admin समाचार 892
श्रीमतीसँग मस्त सुति`रहेका श्रीमान् राती साढे २ बजे पलङमुनिबाट आवाज आए`पछि ब्यूँझिए । उनले पलङ`मुनि के रहेछ भनेर हेर्दा त्यहाँ उनकी श्रीम`तीका प्रेमी लुकि`रहेको भेट्टाए । बेडरुममा श्रीम`तीका प्रेमी भेट्टाएपछि उनी रिस`ले आ`गो भए ।
हेर्नु’होस् यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
May 8, 2021 admin समाचार 5478
शनिबार अमेरिकी डलर’सहित अन्य देशको विनि’मयदर घटेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तो’केको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १७ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकि’एको छ भने बिक्रिदर १ सय १७ रुपैयाँ ९२
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242137)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (230029)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229660)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228488)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (228038)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227455)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226823)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226405)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (196993)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194421)